DEG DEG: Shirkii Madaxda Maamul Goboleedyada oo Qarka u saaran in lagu kala tago( MAXAA SOO KORDHAY?) – Kismaayo24 News Agency
by admin 3rd September 2018 3rd September 2018 01009
War goordhaw aan ka helnay Ilo xog ogaal ah oo ku sugan Magaalada Kismaayo ayaa waxaa uu sheegaya in dib u dhac uu ku yimid shirkii ay maanta kismaayo ku yeelan lahaayeen madaxda maamul goboleedyada.
Shirka oo lagu waday in galabta casir kadib uu furmo ayaa la shaaciyay in uu dib u dhac ku yimid lamana oga xiliga uu si rasmi ah u furmaayo.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dib u dhaca shirka ku yimid ay ka dambeysay markii kulan xasaasi ah ay yeesheen Danjraha qaramada Midoobay ee Soomalia iyo Madaxda Maamul goboleedyada waxaana danjire Keating uu madaxda ka dalbaday in shirka la baajiyo sidaas ayuuna ku baaqday.
Wada hadallo aan kala go’ laheyn ayaa hadda ka socda Madaxtooyada kismaayo kaasi oo si goon gooni ah ay isugu arkayan madaxda maamul goboleedyada iyo danjire keating oo qudhiisa si gooni gooni ah ula kulmaya madaxda maamul goboleedyada.
Waxaa suurta gal ah in shirka uu baaqdo iyadoo waxkasto ay is beddeli karaan waxaana arrimaha ugu muhiimsan ee shirka loo baajiyay ay tahay maadama keating uu ka codsaday madaxda maamul goboleedyada in wixii khilaaf ah oo jira lagu dhameeyo wada hadal balse aan loo baahneyn shir aan hadhow la mahdin doonin cawaaqib xumada ka dhalan karta.
Shir looga hadlyo arimaha dhalinyarada Oo Maanta ka furmaya Muqdisho
Golaha Wasiiradda Galmudug oo kulan xasaasi ah ku yeesha Galkacyo
Daawo: Ra’isul wasaare kheyre oo maanta xariga ka jaray wado loogu magac daray DR. KADARE oo dayactir lagu sameeyay
Tifaftiraha K24 27th March 2017 27th March 2017